Rehetra ilaintsika dia ao amin'Andriamanitra — Trip LEE - OFISIALY SITE
Tsia dia tsia. Tsy mila miatrika rafitra, andriamani-diso, ary tena mampitony fomba. Tsy maintsy hiverina any. Satria na dia eo ny fahoriana isika, dia afaka mahita ny zavatra rehetra ilaintsika an'Andriamanitra.
Ankehitriny dia fantatro no hihaino ny Kristianina hoe ny fotoana rehetra fa Andriamanitra dia ampy, fa Andriamanitra dia ilaintsika rehetra, fa tsy foana ny mahatsiaro tena. Inona Marina no Atao hoe? Isika dia miaina ao anatin'ny tontolo lavo, amin'ny lehibe olana. Koa ahoana no hihaona rehetra ilaintsika? Inona no mijery tahaka ny, saika, na dia ny zava-drehetra dia nidona teo manodidina antsika?
Io karazana fahoriana sy ny fahoriana dia tsy avy any ivelany ho an'Andriamanitra na ny Teniny. Nahita izany izahay ao amin'ny Salamo avy tamin'ny herinandro lasa ary ho hitantsika izany indray amin'ity herinandro ity ao amin'ny tena manaraka ny Salamo, toko 142. Hoy i Davida izany Salamo koa. Ary inona no hitantsika ao amin'ny vavaka nataon'i Davida no olana, tsy afa-manoatra, aretina tsy azo sitranina ny olona niantso fanampiana.
Alohan'ny mamaky ny andinin-teny izahay aza, Tiako homena ny sasany fototra. Hitantsika ny tantaran'ny fiainan'i Davida ao amin'ny bokin'ny 1 Samuel.
Davida dia iray amin'ireo tsara indrindra fantatry ny olona ao amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Izy angamba malaza indrindra noho ny scrappy faharesena Goliata. Ankapobeny fotsiny izy natsipiny-bato azy ny sasany ka slayed azy. Rehefa nanao izany i Davida, Mbola i Saoly no mpanjaka. Fa ny Isiraely olona lasa tena tia an'i Davida. Nihira hira mihitsy aza izy ireo mikasika ny fomba mahagaga izy, mampitaha azy Saoly. Izy indray no lasa malaza noho ny mpanjaka, ary ny mpanjaka tsy tia azy. Koa na dia nanana ny fitahian'i Saoly Mpanjaka talohan'ny, namono an'i Goliata, Saoly izao nijery an'i Davida ho toy ny fahavalony. Ary izy vao hanao izay rehetra azony natao mba hamono azy. Ary nony Davida nanoratra ity Salamo, dia ny teo amin'ny hazakazaka. Izy no ady mahery fo, izay no efa nivadika ho mpandositra. Ary ny mpanjaka dia nanao ny fahafatesan'i Davida isa ny anankiray teo amin'ny lisitry ny laharam-pahamehana. Izany an'i Davida hamely ny mpanjaka sy ny tafika manontolo.
Ary toy izany koa eto amin'ny Salamo 142 hitantsika David, niafina tany anaty lava-bato. Dia matahotra ny ainy, ary izany amin'izany fahoriana izay mitaraina amin'Andriamanitra.
I hiantso mafy ho an'ny Tompo; I hanandratra ny feoko ho amin'ny Tompo noho ny famindram-po. Ka haidiko ny alahelony eo anatrehan'i azy; eo anatrehany ny fahoriako lazaiko. Raha reraka ny fanahiko ato anatiko, dia ianareo izay mahalala ny lalana. Ao amin'ny lalana izay mandeha ny olona no nanafenany fandrika hamandrihany ahy. Jereo ny ny tsara sy mahita;Tsy misy miahy ho ahy. Tsy manana fialofana;Tsy misy miahy ny fiainako. Mitaraina aminao aho, Tompo O; Miteny aho, "Ianao no fialofako,anjarako eo amin'ny tanin'ny velona. "Henoy ny fitarainako,fa izaho reraka indrindra; vonjeo aho tsy ho ireo izay manenjika ahy,fa leoko. Ahy afaka amin'ny am-ponja, Mba hiderako ny anaranao. Ary ny olo-marina dia hanangona ny momba ahy noho ny soa ho ahy. (Salamo 142, DIEM)
Isika dia handeha ny mandeha amin'ny alalan'ny lahatsoratra ity. Ary isika dia handeha ho any hieritreritra zavatra manokana efatra no ianarantsika momba an'Andriamanitra ao amin'ny vavaka avy David. Ary rehefa mandeha ny alalan 'izany, dia hahita fa na dia amin'ny andro fahoriana mahatsiravina, dia afaka mahita ny zavatra rehetra ilaintsika an'Andriamanitra. Ny zavatra voalohany hitantsika dia ny hoe Andriamanitra no namantsika amin'ny andro fahoriana.
ny. Andriamanitra Miahy
Ny fomba Nivavaka i Davida mitoetra ny fiheverana fa Andriamanitra mihaino. Izy jerena, dia hoatran'ny fa manana fifandraisana amin'Andriamanitra ary Andriamanitra tena miahy ny zava-mitranga amin'ny fiainany. Tena marina tsara tarehy mahavariana raha ny hevitrao momba izany. Andriamanitry ny amin'izao rehetra izao mpiandry ondry miahy ity mpandositra. Mety hieritreritra be fisalasalana fa fiahiana momba ny olana dia tsy tena manan-danja, na ho be ny fahasamihafana. Iza no mila tsy hita maso namana, Raha ny zava-drehetra eo amin'ny fiainanao dia korontana? Anefa izy ireo Te ho tena diso. Ny zava-misy fa Andriamanitra no namana, fa miahy, mahatonga ny fahasamihafana rehetra eo amin'izao tontolo izao. Na na tsy misy olona miahy ny toe-javatra manova fomba ianao rehefa milaza aminy ny momba izany.
Ohatra, Inona no hitranga raha ny tariby nivoaka, ary raha tokony niantso ny tariby orinasa Antsoiko ny Internet mpamatsy. Eny ary afaka miantso aho ary hilaza azy rehetra ny olana miaraka amin'ny tariby. Afaka mampahatsiahy azy ireo ny fomba efa aho mahatoky mpanjifa, ka hampiaiky volana azy ny fomba Maharikoriko amin'izao aho mahatsiravina fanompoana. Fa satria hoe diso isa, tsy miraharaha. Ary tsy ry zareo handeha hanandrana hanao na inona na inona momba izany. Raha ny marina aho antoka tsara tarehy izy ireo tsy miraharaha na dia rehefa miantso ny tsara aho isa, ary tsy hanao na inona na inona momba izany, fa mahazo izay aho nanao hoe:. Tsy zava-dehibe na tsia ny olona iray miahy.
Ary Tiako ho sary an-tsaina ny zavatra mety ho tahaka raha tsy miraharaha momba ny olana. Mety mitaraina amin'Andriamanitra mandrakariva, nefa tsy manao fahasamihafana mihitsy. Anontanio an'i Davida raha zava-dehibe fa miahy. Jereo indray ny andininy iray.
I hiantso mafy ho an'ny Tompo; I hanandratra ny feoko ho amin'ny Tompo noho ny famindram-po. Ka haidiko ny alahelony eo anatrehan'i azy; eo anatrehany lazaiko fahoriako.
Izany no maika ny olona amin'ny loza. Ny ainy dia nanao vy very. Toy izay ny ao anaty trano mirehitra. Toy ny hoe izy nanenjika ny jiolahim-boto miaraka amin'ny basy. Ary ny mafy niantso vonjy. Azoko sary an-tsaina an'i Davida tany amin'ny lava-bato, tsemboka araka izay mivavaka vavaka ity.
Ary raha David mivavaka, fantany fa Andriamanitra ny fisakaizana ary miahy. Ary izany fahamarinana izany mitarika ny fomba mivavaka.
Fantany Andriamanitra dia mihaino. Jereo ny andininy faha-enina. Hoy izy, "Henoy ny fitarainako fa Izaho reraka indrindra." Ankehitriny Tsy mino aho fa izany no izy miezaka handresy lahatra Andriamanitra mba mifamadika azy ary mihaino ny fanovana. Hoy i Davida izao ny sy ny ao amin'ny Salamo. Mino aho fa i Davida hoe:, "Efa nampanantena ny mihaino ny olona rehefa miresaka aminao. Koa mihainoa ahy. Aho miresaka. "Izany dia tahaka izy nipaipaika azy ny sorony. Like, "Tompo ô, mihaino ny malalanao. I manan-kolazaina. "
Fantatr'i Davida momba ny lalana firaketana. Fantany fa Andriamanitra efa nanao fanekena tamin'ny vahoaka ity. Fantany fa Andriamanitra dia nampanantena fa homba azy ireo. Fantany ny momba ny fomba efa nandre ny vavaka, dia nanolotra azy ireo hatrany hatrany. Ary nanantena fa izany no Andriamanitra, dia hihaino azy io fotoana io ihany koa.
Christian, no mivavaka amin'ny fahalalana ity? Sa sary an-tsaina fotsiny ianao hoe teny? Moa ve ianao mivavaka miaraka amin'ny fahatsapana ny hitiavan'ny Andriamanitra miahy sy ny fitiavana ho anao? Dia ny vavaka tena fifandraisana amin'Andriamanitra sa ianao fotsiny ka manipy teny amin'ny valindrihana? Moa fotsiny ny fombafomba? Tsy zava-dehibe fa Andriamanitra dia namana iray izay miahy.
amin '. mitaraina
Afaka mianatra avy amin'ny fomba David mivavaka. Davida dia tena namoahany ny fitarainana ho an'Andriamanitra. Ary fantatsika fa ao amin'ny Soratra Masina mandidy antsika Andriamanitra tsy mba nimonomonona ka mitaraina. Fa Davida eto dia mampiseho antsika ny lalana marina mba haneho ny fitarainana. Tsy mimonomonona sy mitaraina hanohitra an'Andriamanitra toy ny Israelita tany an-tany efitra. Tsy hitaraina amin'ny fomba izay mametraka ny toetran'Andriamanitra na ny fitsarana an fanontaniana. Tsy nataony an'Andriamanitra ny fitsarana.
Ary raha ny marina no manao ny mifanohitra amin'izany. Araka ny ho hitantsika aoriana ao amin'ny Salamo Davida dia manamafy ny zava-tsoa. Tsy maninona ny iasàny ny fitarainana ho an'Andriamanitra, fa manao izany amin'ny fahatokiana tanteraka ao Aminy. Tsy maninona ny hilaza amin'Andriamanitra ianao manana ny marokoroko ny. Fa raha niampanga Azy ny ho tsy ara-drariny - na mafy, na ao am-pontsika - izany rehefa lasa ny ota.
Fa ny vavaka dia sarotra ny mahatakatra indraindray. iray mpiangaly rap, ao ny hira atao hoe Andriamanitra ô, Niresaka momba ny vavaka toy izany.
"Mino aho fa ny sahirana izy mihazona ny tsipika azafady / Antsoy hankatỳ amiko adala aho nieritreritra angamba mampaninona Afaka namaky teny."
Izy dia mitondra ny tsara teboka. Andriamanitra efa mahafantatra izay mieritreritra eo anatrehanao hilaza Azy. Raha fantatr'Andriamanitra ny zava-drehetra, inona no hevitra ny nilaza taminy? Moa fotsiny ny fanatanjahan-tena ao amin'ny fananarana? Tsy manahirana ahy ny Kristianina, rehefa miresaka momba ny vavaka toy ny hoe ny tena tanjona dia ny fampifanarahana ny sitrapontsika amin'ny an'Andriamanitra. Izany no tsy marina.
Lazao aminy isika, satria mihaino antsika Izy, Mahafinaritra azy nandre avy amintsika, ary miahy ary mamaly foana amin'ny fitiavana (bebe kokoa momba izany tatỳ aoriana). Fa masìna ianao, aza milaza an'Andriamanitra ny olana. Mitaraina aminy. Fa avy ny fitarainana. Asandrato ny feonao. Mianara avy amin'ny David eto.
Miaro mandeha. Jereo izay lazainy ao amin'ny andininy faha-telo.
Raha reraka ny fanahiko ato anatiko, dia ianareo izay mahalala ny lalana. Ao amin'ny lalana izay mandeha ny olona no nanafenany fandrika hamandrihany ahy.
Na aiza na aiza David nijery, Saoly niafina fandrika ho azy. Indroa izy nitady hamono azy izy, rehefa nilalao ny harpa ho azy. Dia natsipiny lefona azy ary niezaka azy hifantsika amin'ny rindrina. Nomen'i Saoly ny zanany vavy minia, tahaka ny fandrika ho azy. Niezaka handresy lahatra ny zanany, Davida BFF, mba hamono azy. Ary ankehitriny Saoly sy ny miaramilany dia nanenjika azy. Misy ny loza isaky ny anjara.
Fantatro ny sasany amintsika te afaka mifandray amin'i Davida eto. Mahatsapa toy ny na aiza na aiza mitodika misy fahoriana. Mahatsapa toy ny fiainantsika manontolo dia mikorontana. Izany no mahatonga kivy izahay. Izany no tsapany, fa Davida.
Fa ny hoe: ny fanahiny fa rehefa reraka, raha ny fanahy reraka, raha ny reraka ny, Andriamanitra no mahalala ny lalana. Izany Andriamanitra izay mahafantatra ny zavatra mitranga amin'ny alalan'ny.
Ao amin'ny andininy faha-efatra milaza an'Andriamanitra foana izy momba ny zava-mitranga.
Jereo ny ny tsara sy mahita; tsy misy voakasika ho ahy. Tsy manana fialofana;Tsy misy miahy ny fiainako.
D. Tsy misy Fa Andriamanitra
Davida dia tafasaraka tamin'ny vadiny sy tafasaraka tamin'ny namana tsara indrindra, Jonathan. Izy no tsy noraisina tao amin'ny fanjakana. Tsapany toy ny tsy misy miraharaha ny momba Azy, toy ny tsy misy mahavonjy azy. Na izany aza dia mandeha eo anatrehan'Andriamanitra. David mahalala an'Andriamanitra ny fisakaizana ary fa Andriamanitra dia hikarakara azy.
Inona no fiovana izay mahatonga ny namana efa niamboho anao. Sy ny fianakaviana no nafeniko anao. Ary ny mpiara-miasa no tsy miraharaha ny momba anao. Ary ny mpiara-monina aza tsy fantatro hoe iza ianao. Andriamanitra no mahalala anareo ary Andriamanitra miahy anao. Andriamanitra mihaino ny vavaka. Andriamanitra no mahalala hoe firy bolo dia ny lohanao. Fantany ny fijaliana sy ny korontana ianao mahatsapa. Ary amin'izany heviny, ny mino an'i Jesosy dia tsy irery.
Matetika isika no mandany ny fiainantsika miezaka ny ho voamariky ny hafa ny olona, maniry ny sainy sy ny fanajana. Tianay izy ireo mba miahy antsika. Andriamanitra miahy! Tsy misy nosy lavitra, na nandao trano izay ny mpino ho irery. Andriamanitra no momba anao. Ary tia anao. Ary Izy miahy.
marina, tsy misy Andriamanitra tahaka ny namanao ianao, dia ho lao. Mety ho mahakivy raha Salamo nifarana eto. Ary maro eto amin'izao tontolo izao no hifarana ny mitaraina any. Fa Davida Fantany fa na dia rehefa mahatsapa ny tena irery ary nandao, Andriamanitra miahy. Ary Fantany fa rehefa mila olona hikarakara azy, dia tokony hihazakazaka ho an'Andriamanitra.
Noho izany dia afaka mahita ny zavatra rehetra ilaintsika an'Andriamanitra, na dia izany lava volo. Fa Andriamanitra tokoa toy ny namana tsy izay ilaintsika.
II. Andriamanitra no ny fiarovana amin'ny andro fahoriana
Te-hitondra ny saina ho iray zavatra hafa hoy izy eo amin'ny andininy faha efatra. Hoy izy, "Tsy manana fialofana." Ary rehefa mandre ny teny hoe fialofana, dia tonga dia mandeha any io miainga dikany. Mihevitra isika fa hoe izy tsy manan-mihazakazaka ny. Izany tsy izay hoe eto. Izy dia midika hoe tsy misy an-trano aho. Tsy manana fialofana. Aho na aiza na aiza mba hatory Manana. Aho ara-batana ara-bakiteny sarona. Tsy manana ny safidy ny nanamarina tao amin'ny Motel 6. Izay no antony ny miafina ao anaty lava-bato.
Noho izany dia afaka mahita ny zavatra rehetra ilaintsika an'Andriamanitra? Afaka Andriamanitra ho trano ho antsika? Jereo ny andininy faha-dimy.
Mitaraina aminao aho, Tompo O; miteny aho, "Ianao no fialofako,anjarako eo amin'ny tanin'ny velona. "
Voalohany izy hoe:, Tsy manana namana, fa ianao namako. Tsy manana na iza na iza mba hihaino, fa ianao hihaino ahy. Tsy manana mpikarakara, fa ianao hikarakara ahy. Ary dia ny hoe:, Tsy manana fialofana, fa ianao ny fialofana. Ianao fialofako.
Raha mbola miasa amin'ny toriteny io no tena zoomed ao amin'ny andininy ity. Tiako izany mba ho bebe kokoa ho antsika noho ny mahafatifaty kapoaka kafe andininy. Inona no tena dikan'izany eo amin'ny tena fiainana?
Nahita izany izahay tamin'ny herinandro lasa fandosirana teny ao amin'ny Salamo 141 koa. Ary hitantsika izany manerana ny Soratra Masina. Izy no tsy nanao hoe: fa Andriamanitra no fialofana ara-batana ny ara-bakiteny. Nefa tsy hoe eo amin'ny tsy fisian'ny ara-batana pialofana, Andriamanitra dia iray hafa karazana fialofana ho azy. Andriamanitra no fandosirana.
Inona no dikan'ny hoe ho an'Andriamanitra mba ho fialofana? Heveriko fa hoe Izy no fiarovana avy ny zavatra rehetra izay mandrahona anareo ao amin'ny tontolo ivelany. Na dia efa nanao ny tokantranontsika ho antsika kely ihany lanitra eto an-tany miaraka amin'ny fiononana sy ny fialamboly ny karazan'olona rehetra, fiarovana dia indrindra ny tanjon'ny fialofana. Tena mba hiarovana antsika amin'ny loza - avy Weather, avy amin'ny mpangalatra, avy amin'ny mpanafika.
Henoy izay milaza Davida ao amin'ny Salamo hafa nosoratany fony izy tao amin'ny lava-bato.
Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko, fa ao aminareo ny fanahiko mialoka; ao amin'ny aloky ny elatrao no ialofako,mandra-tafio-drivotra ny fandringanana mandalo. (Salamo 57:1)
Davida hoe: dia hanafina an'Andriamanitra. Andriamanitra no fiarovana avy ny fandringanana. More manokana, Izy no nanao hoe: an'Andriamanitra ny fanahiny mialoka. Tamin'ny ampahany lalina indrindra ny hoe iza izy, tamin'ny fototra, hitany ny fialofana an'Andriamanitra.
Andriamanitra ny fialofana ankehitriny? Inona no matoky ny fiarovana? Inona no eo amin'ny fiainanao, fa raha very izany ianao, dia mahatsapa miharihary sy misokatra amin 'ny famongorana? Moa ve ny vola? Moa ve ny sata? mbola tsara kokoa, aiza ianao mihazakazaka amin'ny andro fahoriana? Aiza no tsapanao azo antoka? Moa amin'izany fifandraisana, na izany asa? Raha izany, dia tsy toa tahaka an'Andriamanitra no fialofana.
Ataovy Andriamanitra ny fiarovana dia fihetsika ao am-po. Tena lalina matoky an'Andriamanitra ho toy ny fiarovana. Izany dia fahafantarana fa amin'Andriamanitra isika dia azo antoka. Fantatr'i Davida ny ainy dia notandindomin-doza, ary ny ory, nefa mahatsapa soa aman-tsara. Inona no ho hafahafa mba ho, nefa izao no toerana mpino tsirairay ao anatin'ny tontolo lavo dia tokony hahita ny tenany. ory, mbola am-pilaminana. alahelo, nefa faly mandrakariva.
Ankehitriny aho nanao hoe:, fa satria Andriamanitra no fiarovana, Tsy hamela antsika ho namely amin'ny misy fitsapana? Tsia mihitsy. Eritrereto izany toy izao.
Izany fiambenana manao aho amin'izao fotoana izao dia tantera-drano. Ary tsy midika fa raha mandeha any ivelany any amin'ny orana, na hamela izany aho raha manasa vilia, dia tsy mahazo lena. Inona izany no midika fa na dia ny mpiambina no mahazo lena, dia tsy ho ringana. Izany dia mitovy ho an'ny mpino. Andriamanitra tsy nampanantena ny hiaro antsika tsy ho ao amin'ny tafio-drivotra, fa Izy no nampanantena fa isika dia tsy ho ringana. Afaka hatao namely ny tafio-drivotra, fa tsy ho ringana.
Inona ny dikan'izany? Romanina 8 Maneho ny zavatra mahatsiravina indrindra azontsika sary an-tsaina mitranga amintsika, anisan'izany ny fahafatesana. Ary hoy na dia eo amin'ny rehetra izany, izahay manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'i Kristy, izay tia antsika. Romanina 8 koa dia milaza amintsika fa ny zava-drehetra ho tonga hahasoa izay tia an'Andriamanitra sy ireo voantso araka ny fikasany.
Noho izany mijery, toy ny fiarovana, Andriamanitsika dia hiaro antsika amin'ny zava-drehetra izay ho tonga any am-parany noho ny loza na fandringanana. Ary izany no tokony hampahery antsika. Satria fantatsika raha avelany izany Izy namely antsika, fa noho ny tsara sy ny voninahiny. Izy no fiarovana. Ary Davida toy ny, "Iza no mila fialofana ara-batana, raha manana an'Andriamanitra!"Andriamanitra no lehibe indrindra mila, ary rehefa mila iray no nihaona, ny hafa rehetra mijery kely be.
Dia ho toy izany no angatahako aiza ianao mihazakazaka amin'ny fotoan-tsarotra? Mangataka aho eto na ny Kristianina ankehitriny sy ny tsy kristianina. Aiza no mihazakazaka? Maro amintsika no mihazakazaka ho amin'ny ratsy ny zavatra. Izahay miriotra ho amin'ny fialofana sandoka. Ary hanao ny marina, izany no adala. Na inona na inona fa ny lainga fialofana dia, na ny olona na ny fiankinan-doha - dia zava-doza. Diso fialofana mandainga amintsika. Toa izy ireo azo antoka, fa any amin'ny farany izy ireo ihany no hamela antsika tena tratry. Tsy hiaro antsika amin'ny fandringanana.
ao amin'ny Deoteronomia, Mosesy dia miresaka momba ny fomba Andriamanitra no hamaly ny vahoakany ny fanompoan-tsampy.
Ary dia hilaza, “Aiza ireo andriamaniny [niteny ny sampiny], Dia ny vatolampy izay nialofany… Aoka ireny no hitsangana ka hamonjy anareo; aoka ho fierena ho anareo.” (Deuteronomy 32:37)
Ny olona notafihan'ny firenena hafa, ary ny andriamani-diso izy ireo mametraka ny fanantenany - ny lainga fialofana - tsy afaka hiaro azy ireo. Aza manao ny fahadisoany.
koa, aza manao ilay hadisoana hoe mihevitra ianao dia afaka manao an'Andriamanitra fotsiny ny fialofana, rehefa tonga ny fotoana. Miandry fotsiny ianao mandra-mahazo ratsy, ary avy eo ianao hanafina an'Andriamanitra. Fa tsy misy dikany mihitsy. Tsy miandry ny tafio-drivotra avy mba hanorina trano. Miaina ao an-trano, ary ianao voaaro rehefa manomboka ny orana. Tsy voatery ho raiki-tahotra rehefa manomboka drizzling, satria ianao efa nanafina ny tenanao ao Aminy. Izany dia manomboka amin'ny fihodinana amin'ny fahotana sy matoky Azy, fa ho voaro amin'ny fahatezerana ny olo-marina. Ary manohy ny mihazakazaka hiverina any Aminy isan'andro isan'andro.
Ary rehefa miresaka momba ny fiarovana, tsy afaka hanadino ny zava-misy fa roa andro lasa izay zavatra mahatsiravina nitranga tao Newtown, Connecticut. Hafa anankiray amin'ireny fanafihana faobe amin'ny sekoly. Fa tena tanora ankizy dimy sy enin-taona ankizy. Izany no tokony hahatezitra antsika sy hampalahelo antsika. Ary ny zava-doza toy izany ny olona manontany fanontaniana.
Christian, inona ianao no manao amin'ny namanao any am-piasana izay milaza, "Aiza no Andriamanitrao eo amin'ny ity? Nahoana no tsy Izy hiaro ireo ankizy tsy manan-tsiny? Nahoana no izy dia aoka izay hitranga?"Inona no holazainao fa?
Inona no holazaiko? Heveriko aho hoe:, Tsy fantatro. Nahoana no tsy ahy fa tsy? Tsy fantatro. Tsy te-hanome valiny filozofia sasany momba ny olana ny ratsy. Tsy misy olona te-hihaino izany. Mieritreritra aho fa mety fotsiny aho hoe tsy fantatro ny antony, fa Izaho no mahalala an'Andriamanitra. Ary Izy Tsara. Andriamanitra tsy nilaza taminay ny antsipiriany rehetra momba ny nahoana no avelany hisy ny zavatra sasany, fa efa nilaza taminay zavatra Toy. Fantatsika fa tsara, ary ny hendry, ary tonga lafatra. Izy no efa voaporofo fa. Dia izay rehetra azoko atao dia ny matoky Azy, mivavaha ho an'ireo niharam-boina, ary tsarovy fa tsy misy toe-javatra mahatsiravina izany fa tsy afaka mihazakazaka ho an'Andriamanitra.
Satria na dia ao am-po indrindra ny toe-javatra fahoriana entin'ny, dia afaka mahita ny zavatra rehetra ilaintsika an'Andriamanitra. Izy no namana sy ny Mpiaro, fa misy bebe kokoa.
Mitaraina aminao aho, Tompo O;
Miteny aho, "Ianao no fialofako,anjarako eo amin'ny tanin'ny velona. "
Davida dia miantso an'Andriamanitra ho anjara. Izao teny izao anjara dia midika hoe anjara. Koa izany mety manondro ny anjara lovan'ny - ny ampahany izay efa tavela. Mety hoe iray manokana izany valisoa ara-drariny anao. Izany amin'ny toe-javatra ankehitriny, David manana na inona na inona. Izy no niala an-tranony, ary tsy tao an-mpanjaka tsara fahasoavana.
Koa ny hoe:, "Tsy manana anjara, lova, ny valim-pitia. Andriamanitra, ny valim-pitia ianao. Ianao ny harena. Ianao no tontoloko!"Andriamanitra dia ny zava-drehetra.
Mivady dia nijery izany lahatsary fanadihadiana amin'ny ESPN herinandro ity antsoina hoe notapahiny. Ny fanadihadiana dia momba ny atleta, izay nisy fotoana nisy millionaires, fa nahita ny tenany tanteraka nanapaka. Ny sasany amin'ireo ara-bakiteny ry zalahy nanao an-jatony tapitrisa, fa nitsoka izany rehetra izany amin'ny trano, fiara, fitafiana, ary lafo vidy fomba fiaina. Niaina toy ny zavatra, fananana, fitaovana ireo ny hareny. Ary rehefa very daholo izany, dia tsy fantany izay tokony hatao. Ny anjara lasa.
Ary misy lehilahy tahaka an'i Paoly ny Apôstôly. Iza no ao amin'ny Filipiana milaza fa ny nianatra ny ho afa-po, na ny manan-karena na ny mahantra izy. Ve ianao te-hahafantatra ny zava-miafina? Fantany fa tena nila rehetra i Kristy. Rehetra tiany i Kristy. Vonona ny manary ny zava-drehetra izy mba manana an'i Kristy. Andriamanitra dia ny harena. Tsy tianao ny hahazo izany teboka?
Araka ny A.W. Tozer nataony tao an-boky hoe Ny fikatsahana an'Andriamanitra, "Ny olona izay manana an'Andriamanitra noho ny harena manana ny zava-drehetra ao amin'ny Iray."
amin '. Joy tsy mifototra amin'ny vola
Ao amin'ny fahazavana izany, ny fifaliana tsy afaka ny ho fanaovana eo amin'ny banky kaonty. Ny fifaliana sy ny fiadanana dia tsy afaka miakatra sy midina amin'ny fomba milamina ara-bola isika, mahatsapa, izay ny fakam-panahy indraindray. Mila ny karazana vatolampy mafy matoky an'Andriamanitra, izay miasa mafy mba hanome, fa matoky an'Andriamanitra koa mihoatra noho ny vola. Afaka matoky vola, saingy ratsy hevitra. Tsy misy vola izay tsy azo hitsofana na nangalarina. Ny vola dia tsy haharitra, fa Andriamanitra no. Tokony ho ny harena, na dia amin'ny andro fahoriana.
Inona no azonao atao ny asanao amin'ny fomba izay prioritizes Andriamanitry ny vola? Ve ny fanirianao sy misambo-bola, hahatonga ny fikatsahana an'Andriamanitra sy ny mandringa mijery lackluster? Raha izany, Andriamanitra dia mety tsy tena ho harena. Mety tsy mahita Azy ho toy ny tena valisoa.
Ary Andriamanitra nanao hoe: fa isika rehetra dia tena mila tsy hoe ny hafa rehetra ilaina manjavona. Ary izany no tsy antso mba hanomboka tsirambina rehetra ny zavatra ilaina hafa. Fa izany dia antso mba miankina bebe kokoa amin'ny tena mila.
d. Ny tanin'ny velona
Tsikaritrareo fa hoy Davida Andriamanitra no anjarako eo amin'ny tanin'ny velona. Izy no nanao hoe: Andriamanitra no izay rehetra ananako sy izay rehetra mila fotoana izao eto amin'ity fiainana ity. Koa ny tsy nanao hoe: Andriamanitra ihany ny rakitra any amin'ny fiainana manaraka. Izy no nanao hoe: amin'izao fotoana izao, Andriamanitra dia izay rehetra mila aho.
Fantatro fa misy ny sasany amintsika eto amin'izao fotoana izao izay tsy manana ny zavatra rehetra tiantsika, ary angamba tsy ny zavatra rehetra ilaintsika. Fa raha manana Andriamanitra, hamporisihana. Ary hidera an'Andriamanitra fa ny lehibe indrindra mila Efa nihaona ao amin'i Kristy.
Na dia rehefa mahatsapa toa isika tsy ampy, dia afaka mahita ny zavatra rehetra ilaintsika ao amin'i Kristy.
IV. Andriamanitra no ny Mpanafaka amin'ny andro fahoriana
Olo-Mahery sarimihetsika dia tena olana amin'izao fotoana izao. Isan'andro mijery ny misy olo-mahery vaovao sarimihetsika. Batman, Superman, Spiderman, Monkeyman ... vao mahita raha mbola mihaino. Dia manana karazana asa hafa toy ny sarimihetsika nalaina ary James Bond. Tsy mba tahaka ireo karazana sarimihetsika, satria isika nahaliana ny mahery fo lehibe kokoa noho ny fiainana izay afaka hamonjy ny andro toa tsy afa-manoatra rehetra. Ary toy izany koa i Davida Manome filazalazana sary eto an'Andriamanitra. Jereo ny andininy faha-enina.
Henoy ny fitarainako,fa izaho reraka indrindra;vonjeo aho tsy ho ireo izay manenjika ahy, fa leoko.
amin '. reraka indrindra
Davida indray milaza an'Andriamanitra fihetseham-pony. Izy no reraka indrindra. David amin'ny farany ny tenany. Tsy misy na inona na inona izy na olon-kafa atao mba hamonjy azy. Izy azom-pahoriana. Ary ny amin'ny fahoriana izany fa dia mandeha ho an'Andriamanitra. Indray mandeha indray i Davida mahalala momba an'Andriamanitra. Fantany fa Andriamanitra no manao ny tsy azo. Efa nihazona izany andraikitra izany izy nahita an'Andriamanitra hanao ny azo atao ao an-fiainana ny sasany amin'ireo ady izy nihazona izany andraikitra izany niady. Raha Andriamanitra afaka manome orsa, ary goavam-be, ary ny tafika eo an-tànany, Dia afaka tokoa hanafaka iray tena manahy be loatra mpanjaka.
fa jereo, tsy mangataka zavatra raha tsy fantatrao ianao sahirana. Zanako mitaraina noho ny sakafo, satria mahatsapa ny hanoanana sy ny fantany dia mila sakafo. David mahatsapa fa reraka indrindra ary mitarika azy mba mitaraina amin'Andriamanitra. Fantany fa ireo izay manenjika azy dia mahery noho izy. Fantany fa Andriamanitra irery ihany no afaka hametraka azy ho afaka amin'izao toe-javatra manokana.
Ary Hitanao, fa Davida manontany. Davida dia tsy manontany toy ny hoe ny zo hahazo izany fanampiana. Ao amin'ny andininy faha-iray Milaza izy fa i fangatahana ny 'famindram-po. "Izy no mangataka fa tsy mba mety hahazo izay mendrika, fa kosa zavatra tsy mendrika: fanafahana. Ary ny vavaka dia tokony ho toy izany koa. Manetry tena miaiky fa tsy manan-kery loatra ianao. Tsy mendrika na inona na inona. Fa isika mangataka amin'Andriamanitra mba Namindra fo hamonjy antsika.
Matetika aho no manontany ny tenako fomba ahafahako manampy ny namana izay no ao amin'ny toerana toy izao. Mazava, Tsy te fotsiny hoe "Andriamanitra dia ampy" ary hanambany ny toe-javatra. Ny hany zavatra fantatro atao dia manampy azy ireo ho amin 'ny toerana izay i Davida. Amin'ny maha-fiangonana izany fomba ahafahantsika manompo ny tsirairay ao anatin'ny fotoam-reraka indrindra. Ampio izy ireo hahazo hatramin'ny farany ny tenany rehefa miaiky ny mila ho Azy ary hatoky Azy bebe kokoa. Mivavaha ho azy ireo, tia azy. Matetika izany no zavatra rehetra azontsika atao.
d. Nasainy hangataka fanampiana
Ho adala Davida mba handinika mihazakazaka ny olon-kafa, rehefa toe-javatra io dia tsara avy ao amin'ny, ary ny hafa-maso. Toy izany koa ny antsika, nefa mihazakazaka any an-kafa isika indraindray. Fa miantso antsika hanatona azy.
…Antsoy Aho amin'ny andro fahoriana; Izaho no hamonjy anao, ka hanome voninahitra Ahy ianao. (Salamo 50:15)
Andriamanitra manambara ny tenany hatrany hatrany ao amin'ny Soratra Masina ho toy ny mpanafaka. Ahoana momba ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny Ranomasina Mena? Ahoana ny teo amin'ny fiainan'i Joseph? Ahoana ny maro ady? Rehefa toa tsy azo rehetra, Andriamanitra dia mbola afaka hamonjy. Tsy misy fahavalo iza no ara-dalàna mitsangana hanohitra Azy. Tompon'ny maro, latsaka ny, tendrombohitra hiankohoka, sy ny rivotra sy ny onja hampijanona eo anatrehany. Ary ny lalana firaketana dia mampino. Mihitsy aza izy nandeha mafy mba hanafaka antsika amin'ny fahotana.
Ny vavaka ao amin'io salamo, sy ny fahoriana sy ny hamehana, Mampahatsiahy ahy ny vavaka iray hafa ao amin'ny Baiboly. Raha ny tena izy, ny olona mivavaka dia be tatỳ aoriana havana ny lehilahy izay nanoratra ity Salamo. Mampahatsiahy ahy ny vavak'i Jesosy tao amin'ny Sahan'i Getsemane. Jesoa mahafantatra izy no handeha amin'ny hazo fijaliana. Ary miangavy amin'Andriamanitra, ary ankapobeny manontany azy raha toa ka misy fomba hafa. Te ho afaka amin'ny fanaintainana izay hialoha Azy. Ny fahoriany Tena lalina ny sweated ra.
Andriamanitra tsy nanolotra an'i Jesosy tamin'ny fanaintainana sy ny fijaliana tsy takatry ny saina izay hialoha Azy. Ary i Jesoa dia tsy hanandrana afa-mandositra. Fantany izany ny zavatra Tonga Izy mba hanao. Jesosy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ary Jesosy, raha nihantona teo izany hazo fijaliana, Izy no nijaly mba ahy sy ianao dia tsy mila. Izy dia nandray sazy noho ny ota izay tsy nataony akory. Ary nanana fiainana lavorary, Izy tsy tezitra Andriamanitra. Dia tsy dia tahaka an'i Davida, na ianao, na ahy. Izahay mpanota izay efa nanafintohina Andriamanitra masina. Tsy izy anefa no mpanota, nefa Maty mpanota ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana izany. Izy dia nomena ho amin'ny fahafatesana, mba mety ho voavonjy.
Ary Izy no niantso antsika, fa tsy hamonjy ny tenantsika, fa ny matoky amin'ny Hero izay tonga mba haka antsika. Tsy maintsy mandresy izany ady, fotsiny isika mifikitra amin'ny ny iray izay efa manana. Hino Azy. Matokia Azy. Omeo ny fiainanao ho Azy.
Ny marina dia, raha toa ianao ka tsy tena nanantena an'i Kristy rahateo, Andriamanitra tsy namanao amin'ny andro fahoriana. Izy tsy nampanantena fiarovana. Izy tsy nampanantena mba ho ny harena na ny Mpanafaka. Ny Kristianina no mandalo fotoan-tsarotra, fa ny tantara mifarana amin'ny fanafahana. ve anao?
f. Ny antony ny fanafahana
Ahy afaka amin'ny am-ponja,Mba hiderako ny anaranao. Ary ny olo-marina dia hanangona ny momba ahy noho ny soa ho ahy.
Eto dia mazava ny antony te ho voavonjy, Nahoana no te ho afaka - satria tiany ny hidera an'Andriamanitra tahaka ny mpanafaka. Hitany izany ho fahafahana iray hafa ho an'Andriamanitra mba hiseho eny.
Christian, Ahoana no rehefa Andriamanitra efa nanolotra anao? Afaka mieritreritra ny maro, Imbetsaka aho no nahatsapa amin'ny fahoriana sy niangavy tamin'Andriamanitra ny famindram-po. Tsapako toy izany ara-bakiteny ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra namaly ny fivavako. Ary faly aho. Ary tanteraka nanadino ny momba an'Andriamanitra. Tsy hidera Azy. Tsy voninahitra Azy. I nanadino ny momba Azy. Ary na dia nanadino mikasika ny zavatra nataony, izay toa tsy mitombina.
Fony aho ankizy kely, ny nisongadina ny isan-taona dia Krismasy. Ary ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i manodidina izao fotoana izao koa izany no fanampiny manokana. Tamin'izay fotoana izay eo amin'ny fiainana izay tsy manana betsaka. Ianao nahazo cheerios, ianao nahazo naptime, ary nahazo ny Krismasy. Hitako ny kodiarana lehibe dokam-barotra amin'ny tele, ary izaho dia tahaka, "I gotta manana izany." Nahazo lehibe kodiarana. Ary heveriko fa angamba latsa-dranomaso-pifaliana.
Ankehitriny tsy izany ho hafahafa raha nangataka izany ho an'ny volana sy ny volana, fa rehefa tonga indray aho ho any an-tsekoly sy ny olona nanontany ahy izay nahazo, Adinoko ny manonona azy io? Inona no hafahafa no, fa afaka hitalaho amin'Andriamanitra mba mamindrà fo aminay, fa ny andro tatỳ aoriana manadino toy ny hoe tsy nitranga?
Tokony hanao izay rehetra azony atao ny mitadidy ny famindram-po sy hanana fo feno fankasitrahana, na ny journaling na mivavaka amin'ny hafa. Ataovy izay rehetra azony atao.
Rehefa tapitra ny ny Salamo, Hoy Davida ny marina amin'ny hanangona ny momba Azy. Izy dia midika hoe araka izay midera an'Andriamanitra noho ny fahatsarany, mpino hafa dia hiaraka Aminy. Izao dia zavatra atao ny alahady alina isika rehefa mizara izany fijoroana ho vavolombelona ny fahasoavana. Andrenesantsika ny fahatsaran'Andriamanitra ary hanangona manodidina ny iray hafa, ary hidera Azy miaraka. Tena Mpanafaka Lehibe.
Tsy misy toe-javatra mahatsiravina izany fa Andriamanitra dia tsy afaka ny hanolotra anareo. Dia tsy misy mahavonjy anao, Andriamanitra no mamonjy. Miezaka ho ao aminy.
Tsaroako toy ny zanak'osy, mieritreritra fa ny ray aman-dreny afaka mamaha ny zava-drehetra. Tena tsy zava-dehibe ny zava-nitranga, I Neny sy i Dada afaka manamboatra izany. Tsy tiako tsy Nanonofy ny handeha ho any amin'ny mpiara-monina 'trano, na miantso ny havany. Fotsiny aho nankany amin'i Neny sy Dada, satria nahazo ahy. Tsy fantatro ny fomba, fa fantatro nananany ahy.
Mila io karazana ankizy finoana. Ny karazam-pinoana izay hoatran'ny, na inona na inona ny olana, Afaka mandeha an 'Andriamanitra noho ny zavatra Mila. Andao hivavaka.
Kathy • Aprily 16, 2016 amin'ny 6:28 aho • navalin'i
marina izay nolazainao! Misaotra, rahalahy,
Rute • Janoary 23, 2018 amin'ny 9:25 aho • navalin'i